Madaxweynaha Jubbaland ‘Axmed Madoobe’ oo codsi u diray Xildhibaannada BF Somaliya – HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa ka hadlay heshiiskii Doorashada ee madaxda DF Soomaaliya iyo Madaxda Maamul Goboleedyada ay ku wada gaareen Madaxtooyada Villa Soomaaliya.
Mr. Madoobe oo ka hor hadlayay Xildhibaannada Golaha Shacabka ee laga soo doorto Jubbaland ayaa wuxuu ka dalbaday inay ansixiyaan heshiiska Siyaasadeed ee arrimaha doorashooyinka.
Madaxweynaah Jubbaland, ayaa xusay, in heshiiskan uusan aheyn xeer, balse ay tahay is afgarad laga gaaray arrimaha doorashooyinka loona baahan yahay in Golaha Shacabka ay ansixiyaan.
“Ra’iisul Wasaaraha la soo magacaabay waqtigiisa in aad kala shaqeysaan oo soo dhoweysaan, wixii idinka baahan yahay fulisaan, heshiiska siyaasadeed ayaa la gaaray ma ahan xeer waa heshiis siyaasadeed oo aan u aragnay maslaxad inay ku jirto heshiiskaas inuu uusan aheyn xeer ama sharci la marinayo, xalka ugu dambeeyo waa in la fududeeyo”, ayuu yiri Axmed Madoobe.
Wuxuu Axmed Madoobe ka codsaday Golaha Shacabka ee BF Soomaaliya inay ansixiyaan Ra’iisul Wasaaraha cusub ee dalka oo wali aan la horgayn Golaha Shacabka.
Ilaa iyo hadda lama saadaalin karo sida Xildhibaannada u ansixin doonaan heshiiska doorashada iyo Ra’iisul Wasaaraha cusub ee magacaaban, kaasi oo aan weli la horgeyn Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Tags: Axmed Madoobe, codsi ansixin, heshiiskii doorashada